Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato aragtida xargaha | Saadaasha Shabakadda
Sida xaqiiqada ah weligaa Rabbigaad maqashay aragti string. Tani waa mid ka mid ah mala-awaallada ugu xiisaha badan adduunka oo dhan. In sayniska aragtiyo kala duwan ayaa ku dhashay oo isku dayaya inay sharxaan sababta xaqiiqooyinka qaarkood ama natiijooyinka. Si kastaba ha noqotee, aragtida xariggu waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna khaaska badan halkaas. Aragtidan runtii maxay ku saabsan tahay?
Halkan waxaan ku sharaxeynaa wax walba oo ku saabsan aragtidan iyo astaamaheeda, si aad ugu dambeyntii u maqasho oo aad u ogaato waxa ay ku saabsan tahay.
1 Xoogagga koonkan
2 Cabirka koonka
3 Aragtida String iyo sharraxaaddeeda
4 Sharaxaada cabirka dheeriga ah
Waa aragti awood u leh inay sharraxdo adduunka inagu xeeran. Maaddaama marwalba laga fekerayay cabirka meerahan leeyahay, waxaa loo maleynayay inuu lahaa wax ka badan saddex cabbir. Qiyaasaha la yaqaan waa ballac, dherer, iyo dherer. Si kastaba ha noqotee, Caalamka wuxuu ka kooban yahay cabirro badan. Seynisyahanno badan ayaa sharraxayay sida cuf-jiidashada u shaqeyso iyo haddii runtii Qorraxdu masaafadaas ay tahay, ay soo jiidan karto Dunida.
Haddii uu jiro shay miisaan leh, booska uu ku jiro wuu qalloocan yahay. Qaloocaas ayaa ah waxa la xiriira culeyska. Dhulku wuxuu leeyahay tiro cayiman sidaas darteed sidoo kale wuxuu qalooca boosaska. Qalooca booska ayaa ah waxa sababa in shayga wareegto. Taasi waa in la yiraahdo, Waa Qorraxda iyada oo cufkeeda ay awood u leedahay in ay dhaqdhaqaajiso Dhulku taasina waxay leedahay dhaqdhaqaaqa tarjumaadda.
Saynisyahanada sida Albert Einstein iyo Theodor Kaluza Waxay isku dayeen inay mideeyaan aragti uruurin karta oo qeexaysa dhammaan xoogagga aasaasiga ah ee xukuma koonka. Waxaa markaa loola dhaqmi doonaa sidii isla'eg muhiim ah oo furi kara albaabbada oo dhan. Cuf isjiidashada waxaa lagu qeexaa sida qalooca iyo cilladaha ku dhaca booska iyo waqtiga. Sidaa darteed, isku day ayaa la sameeyay si loo sameeyo isla'eg kale oo loogu talagalay xoogga elektromagnetic.
Maaddaama waqtigaas loo isticmaalay in lagu sharraxo cuf isjiidjiidda, maxaa qodob kale oo mas'uul ka noqon kara xoogga elektromagnetic? Maaddaama aysan jirin wax kale oo sharraxa, fikradda ah inay jiraan cabirro dheeri ah ayaa la soo bandhigay. Si kale haddii loo dhigo, si loo sharraxo awoodda elektromagnetic, cabbiro dheeraad ah waa in lagu soo bandhigaa koonka. Sidaas darteed, adduunku wuxuu lahaan lahaa 4 cabir mana ahan 3.
Sidan oo kale, waxaan lahaan doonnaa 3 cabbir muuqaal ahaaneed iyo waqti ahaan cabbir afaraad. Markii la adeegsanayay qaaciidooyinka oo leh cabbir afaraad waxaa la ogaaday in wax waliba hagaagsan yihiin, laakiin macnaheedu maahan inuu helay fure. Taasi waa, haddii cabirro badani ka jiraan koonka, maxaan u arki weynay? Aragtidu waxay ahayd inay sharraxdo inay jiraan cabirro kala duwan oo koonka ku jira. Waxaa jira qaar waaweyn oo si sahlan loo arki karo iyo kuwo kale oo yar yar oo iskood isu soo rogay.
Qiyaasaha yaryar waa cabbir yar oo aan la dareemi karin. Ma arki karno iyaga. In kasta oo aan lagu fahmi karin isha qaawan, haddana waxaa jira tusaalayaal noo sahlaya in la fahmo cabbirada aynaan arki karin.
In kasta oo fiilooyinku noogu muuqdaan shay hal-dhinac uun inaga fog, waan ognahay inaysan ahayn. Xariggu wuxuu leeyahay ballac, dherer iyo dherer, taas oo ah, cabirka muuqaalka ee aan ku haysanno xaqiiqadeenna. Si kastaba ha noqotee, quraanjada, ku socoshada xarigani waa mid saddex-geesood ah oo aad loo heli karo.
Fikradda saynisyahan Klein xoogaa waa la mid, laakiin waa mid aad u yar. Haddaan runti nahay quraanjo yaryar, waxaan u dhaqaaqi karnaa miisaanno yar-yar oo aan awoodno inaan aragno cabirradaas dheeriga ah. Cabirrada ayaa weli isku soo rogay naftooda. Su’aasha ugu weyni waxay tahay, codsiyadaani ma ka shaqeeyaan dunida dhabta ah? Jawaabtu waa maya.
Xogtaas, saynisyahannadu ma haysan karaan xog sida culeyska elektaroniga. Fikradda ayaa ah in la awoodo in lagu sharaxo caalamka oo dhan aragti mideysan.
Aragtida String iyo sharraxaaddeeda
Saynisyahannadu maanta waxay ka hadlayaan ogaanshaha cunsurka ugu yar, aan la kala qaybin karin, ee aan la kala soocin karin ee ka jira adduunka. Aan qiyaasno inaan leenahay kubbadda cagta. In kasta oo atomku loo maleeyo inay yihiin unugga ugu yar ee la arki karo, Kuwani markooda waxay ka kooban yihiin qaybo yar yar sida halsano iyo boombiyo. Quarks waa nooc ka mid ah halista ay protonku ka samaysan yihiin. In kasta oo waxa la rumaysnaa, birqiga gudihiisa waxaan ku arki karnaa fiilo yar oo tamar ah oo gariirta. Waa xadhig. Sababtaas awgeed, waxaa loo yaqaan 'string string'.
Xarigyadan yaryar waxay la mid yihiin kuwa qalabka muusikada waxayna u gariiri karaan siyaabo kala duwan. Waxaa lagu doodi karaa inuu yahay qaybta aasaasiga ah ee adduunka oo dhan. Xargaha waa waxa aan ku aragno adduunka oo dhan gebi ahaanba, tan iyo wax waliba waxay ka samaysan yihiin atomyo oo iyana ka samaysan borotoonno iyo, markooda, qaylo, iyo silsilado.
Aragtidan ayaa markaa, sharxi karta asalka dhammaan xoogagga aasaasiga ah ee koonka ku jira. Dhammaan noocyada tamarta waxay lahaan doonaan xarigyadan gariirka ka wada dhexeeya. Si aan u arko haddii ay tani shaqeyneyso waa inaan ku tijaabiyaa xisaabta anigoo haysta adduunyo leh saddex cabbir. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku shaqeysaa oo keliya adigoo leh adduunyo leh 10 cabbir jidheed iyo waqti. Haddii ay durba adag tahay in la qiyaaso adduunyo leh afar cabbir muuqaal ahaaneed, ku qiyaasi 10.
Sharaxaada cabirka dheeriga ah
Aragtida String waxay noo ogolaaneysaa inaan sharaxno waxa ka dhacaya daloolka madow iyo wixii horay u dhacay Big Bang. Aragtidani waxay sheegaysaa in Bangigii weynaa uu ka dhalan karo isku biirid ama isku dhac caalami ah. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho waxyaabaha sida Gooryaanka si aad ugu safri karto caalamka kale. Thanks to aragtidan, waxaan ogaan karnaa sida loogu safro koonkan oo nolosha la dheereyn doono markii kosmosku dhinto.
Haddii markii shilkii Big Bang dhacay aan hadda haysanno tamar ka yar sidii markii hore jirtay, waxaad u maleyn kartaa in tamartaas xad-dhaafka ah ay tagtay cabbirada kale.
Si kasta oo ay ahaataba, muhiim maahan in la helo aragti noo sheegaysa wax kasta oo ka dhaca koonka habkaas, sidaa darteed waxaan ku noolaan karnaa aragti la'aan
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Aragtida String